१२ बि घा जमिन देखेपछि २० वर्षीय युवकले गरे ६० वर्षीय वि धवा सँग वि वाह – live 60media
काठमाडौ । एकजना महान दार्शनिकले माया र यु द्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भनेका थिए । तर अहिले पनि समाजमा यस खालका उदाहारणहरु लगातार देख्नमा आइरहेका छन् । अहिले बाहिर आएको एक घटनाले सबैको होस उडाएको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा बिहेको विषयमा कुरा गर्दा केटा र केटीको उमेरको अन्तरलाई ध्यान दिइन्छ ।नेपाल लगायतका देशहरुमा मात्र नभई विश्वभर नै केटाको उमेर केटीको भन्दा केही बढी हुन्छ । कहिलेकाहीँ केटीको उमेर पनि थोरै बढी भएका घटनाहरु हाम्रा वरपर छन् ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *
युवक पनि यसको लागि तयार भए । गत शनिबार युवक महिलाको गाउँ पुगे र दुवैले बिहे गरे । महिलाकी छोरीले आमाको बिहेबारे थाहा पाएपछि माइती आएर विरोध गरिन् । विवाद पुलिससम्म पुनि पुग्यो जहाँ महिला र युवाले आफ्नो इच्छाअनुसार बिहे गरेको बताएपछि पुलिसले पनि कुनै कारवाही गरेन ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *
← “जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित हेर्नुहोस्”
महिलाहरुले देब्रे नाक छेड्नुको धार्मिक तथा बैज्ञानिक कारण यस्तो →